Ceslọ Ọrụ Frances Pew Hayes maka Mmụta Na-amụba Anya »Mahadum Hodges
Categories: Ịmụta ihe niile
Learningmụta Adịghị Ada Ada
Frances Pew Hayes Community maka Mmụta Na-adịru Ndụ
Mmemme Ejikere Gị Na Ndị Bi Gị Ebum n'uche
Mahadum Hodges kwenyere na uru na uru nke usoro mmụta ndụ niile. N’ikwekọ n’ozi ahụ, anyị emeela mmemme mmemme maka ndị bi na gị gụnyere isiokwu dịka nka na omenaala, nsogbu dị ugbu a na njem, sayensị na gburugburu ebe obibi, teknụzụ na-agbanwe agbanwe, yana ahụike na ahụike.
Site na ịrụkọ ọrụ ọnụ, anyị nwere ike ịmepụta mmemme ahaziri maka ndị bi na gị nke na-eme ka ha rụọ ọrụ na itinye aka.
Ọ bụ ezie na anyị kwenyere na mmemme anyị na-abara ndị bi na ya uru, ha na-enyekwa udo nke uche mgbe ị na-ahọrọ ihe owuwu gị dịka itinye aka na-egosi na ọ bụ ihe dị mkpa mgbe ị na-ahọrọ ndị okenye bi n'obodo. Kpọọ anyị taa ka ị hụ ka anyị ga-esi nyere gị aka.
Anyị na-eme atụmatụ ahụ. Mmemme a na-atọ ndị bi gị ụtọ. Ọ na-atọkwa gị ụtọ na ihe ọma si na ya pụta.
Kpọtụrụ Onye Nnọchiteanya Ndụ Ogologo Ndụ
Kemgbe Ndụ Mmụta. Uru Na-enweghị Ọgwụgwụ.
Ọtụtụ ọmụmụ na-egosi na mmụta mmụta ndụ na-enye abamuru na-enweghị ngwụcha. Na Mahadum Hodges, anyị kwenyere! Anyị na-enye mmemme nke ndị ọkachamara tozuru oke, gbaara ama, nyere ikikere, ma ọ bụ nwee ahụmịhe pụtara nwa iji kenye ihe ọmụma ha.
Na-akwalite ahụ ike ụbụrụ
HElps anyi jiri ihe omuma mara ihe
Ina-egosipụta echiche dị oke egwu na ụzọ isi edozi nsogbu
Na-eme ka mmụta na-aga n'ihu n'ihi na ọrụ anaghịzi achọ ihe ọmụma dị oke mkpa
Helps n'onwe ya wuo ezumike nká & mụta ụzọ ọhụrụ iji mee ka ọ dịgide
Nwere ike ịkwalite ahụike na ahụike site na:
Increasing ume etoju
Dna-eme ka ọbara mgbali elu
Rmmuta ọkwa nke ịda mba
Lna-emeri ihe ize ndụ nke nkụchi obi na ọrịa strok
Ena-agba onwe gị ume-nkwali
Na-akwado onwe-obi ike
Kemgbe Ndụ amụ ihe na-enwe obi ụtọ na-ebi ogologo ndụ!
Arts (aterlọ ihe nkiri & Music)
Okwu ndị dị ugbu a, (mpaghara, mba, ụwa)
Mara banyere ego
Ahụike, Wellness & Fitness
Ihe Nchọta Obodo
Ọganihu Onwe Onye
Sayensị & Gburugburu
Njem & Nyocha